I-Galaxy Z Flip: yonke into ekufuneka uyazi malunga nokusonga okutsha kwe-Samsung | Iindaba zeGajethi
Ukubheja kwesibini kweSamsung kwintengiso ye-smartphone ebizwa ngokuba yiGlass Z Flip. I-Samsung Galaxy Z Flip iza nayo Uyilo olwahluke ngokupheleleyo kunolo Galaxy Fold, ifomathi esongelayo njengencwadi. I-Galaxy Z Flip luhlobo lwe-clamshell, olufana ne-Motorola RAZR, kodwa eneempawu eziphezulu kunemodeli ye-Motorola.
Le modeli, ngenxa yeendlela zokuvula ezisibonisayo, ikhumbuza kakhulu ezemveli iibhokisi zepowder isetyenziswe ngabafazi, indawo yoluntu ekujoliswe kuyo kwesi sigxina, nangona kungenjalo kuphela. Isamsung ayifuni ukuba neengxaki ezifanayo nescreen seGolden Fold kwaye ikhusele iscreen nge-ultra-thin glass, akukho bhanyabhanya weplastiki.
Iscreen seZ Flip sigutyungelwe ngeglasi encinci-encinci ukukhusela isikrini kwimikrwelo okanye amaqhuma, ke iingxaki ezithi zivezwe kuluhlu lokuqala lweFold aziyi kuphinda zenziwe kwiZ Flip. Ikwavumela ukuba unciphise ngokubonakalayo inani lemibimbi ebangelwa kukusetyenziswa kwezinto zeplastiki. Njengoko sinakho kwimifanekiso yokwazisa, Ubungakanani beZ Flip esongiweyo bulingana phantse nayiphi na ipokotho kwaye inokuvulwa ngesandla esinye.
Le modeli intsha ineendlela ezahlukeneyo zokuvula, ayivuli nje kuphela njengefowuni yohlobo lweqokobhe, kodwa sinokuyivula ngokungathi yeyelaptop, umsebenzi ofanelekileyo ukuze sikwazi ukuthatha iiselfie ngokukhululekileyo, njengoko sibonile kwinkcazo-ntetho. Iscreen esikhulu esisibonayo xa sele sivulekile, zii-intshi ze-6,7 ngefomathi ye-22: 9, eyenza ukuba ibe siselfowuni efanelekileyo yenethiwekhi yoluntu kunye nokusebenzisa umxholo wemultimedia.
Ikhonkco leGlass Z Flip, elona candelo libalulekileyo, nangaphezulu kwescreen, liphefumlelwe yintyatyambo ye-lotus, kwaye icaciswa yintshukumo yokusonga eyonelisayo, ivumela ukulungelelanisa i-engile yokuvala. Ukongeza, ngenxa yetekhnoloji yokutshayela, iyabugxotha nabuphi na ubumdaka obunokungena ngaphakathi obunokuchaphazela ukusebenza koomatshini ekuhambeni kwexesha.
Iscreen esingaphandle kwe-intshi eyi-1,03-intshi yenzelwe ukubonisa izaziso esilindele ukuzifunda kwisiphelo sendlela, kodwa ukongeza, ikwasivumela ukuba siphendule iminxeba ngokushenxisa umnwe kuyo. Esi sikrini Ndiyithatha njengeyona ndawo ibuthathaka kwesi sigxina, kuba iyasinyanzela, ewe okanye ewe, kufuneka sivule i-terminal ukuze sijongane nawo nawuphi na umyalezo okanye isaziso esisifumanayo, kodwa ukuba sithathela ingqalelo ukuba ayibonakali kuba ifihliwe phantsi kombala wesiphelo, inokulungiswa kwisigqibo seSamsung.
1 Iikhamera zeGlass Z Flip
2 Ushicilelo olukhethekileyo lukaThom Browne
3 Ukucaciswa kweGlass Z Flip
4 Ixabiso leGlass Z Flip kunye nokufumaneka
Iikhamera zeGlass Z Flip
Ukuzibophelela kweSamsung kolu luvo lutsha lokusonga lwe-smartphone ayizityesheli iikhamera, elona candelo libaluleke kakhulu kubasebenzisi abaninzi xa behlaziya itheminali yabo, nangona kunjalo, i-Samsung ayihlawulanga inzala efanayo naleyo Uluhlu olutsha lweGPS S20ngokucacileyo kuba ixabiso beliya kunyuka ngokunyuka.
I-Galaxy Z Flip ifaka iikhamera ezimbini zangemva, iphambili ye-12 mpx kunye nefowuni ye-12 mpx, eneendawo ezijolise kuzo ze-f / 1.8 kunye f / 2.2 ngokwahlukeneyo. Ikhamera yangaphambili isinika isisombululo se-10 mpx ngokuvula kwe-f / 2.4.
Ushicilelo olukhethekileyo lukaThom Browne
Isamsung isebenzisane nomyili waseMelika uThom Browne ukumilisela Ushicilelo olukhethekileyo lweGlass Z Flip, ushicilelo olukhethekileyo oluya kubandakanya iGlass Buds kunye neGalaxy Active. Ngokumalunga nexabiso lolu hlelo lukhethekileyo, kuya kufuneka silinde iintsuku ezimbalwa ukuze silazi ukuba ekugqibeleni liyafikelela kuwo onke amazwe apho le fowuni intsha ye-Samsung iya kufumaneka khona.
Ukucaciswa kweGlass Z Flip
Isikrini esingaphakathi Itekhnoloji ye-AMOLED ye-6.7 intshi ene-FullDH + isisombululo kunye nefomathi ye-22: 9
Isikrini sangaphandle I-1.06-intshi ye-AMOLED ngesisombululo sepikseli engama-300 × 116
Inkqubo I-Snapdragon 855+ (isizukulwana sesi-XNUMX)
Ukugcina ngaphakathi Uhlobo lwe-256 GB ye-UFS 3.0
Cámara trasera Ikhamera ephambili ye-12 mpx f / 1.8 kunye ne-12 mpx f / 2.2 yekhamera yesibini
Ikhamera yangaphambili 10 mpx f / 2.4
Inkqubo yokusebenza I-Android 10 ene-UI 2.0 enye
Ibhetri I-3.300 mAh-ixhasa ukutshaja okukhawulezayo nokungasebenzisi cingo.
Conectividad I-Bluetooth 5.0 -Wifi 6-USB-C
abanye Umfundi weFingerprint kwicala - izithethi ze-AKG
Ixabiso leGlass Z Flip kunye nokufumaneka
Njengamahemuhemu amaninzi akhankanyiweyo, i-Samsung iye yafuna ukuba ingakulibazisi ukumiliselwa kwesi sigqeba sitsha kunye nomhla wokumiliselwa ngoFebruwari 14, ngeentsuku ezintathu. Ngokumalunga nexabiso, njengoko amahemuhemu esitsho, Ixabiso lijikeleze i-1.500 euro. Kukho ingxelo kuphela ene-256 GB yokugcina, uguqulelo lwe-4G. Okwangoku ingxelo ye5G yale modeli ayizukumiselwa.
E-Spain imibala emibini iya kubakho: isibuko esicocekileyo nesipili esimnyama, Inguqulelo yegolide esiyibonileyo ngexesha lokuboniswa kubonakala ngathi okwangoku ayicwangciswanga ukumiliselwa kwayo eSpain, njengenguqulelo yomyili uTom Browne.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IGlass Z Flip: yonke into ofuna ukuyifumana malunga nefowuni entsha enokusonga ye-Samsung